Maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay in ay qabteen mid kamid ah diyaaradaha drone-ka Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay in ay qabteen mid kamid ah diyaaradaha drone-ka Mareykanka
January 19, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Sawiro ay baahiyeen warbaahinta Al-Shabaab ayay ku sheegeen burburka diyaaradaha drone-ka ah.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay qabteen mid kamid ah diyaaradaha aan cidina wadin ee drones-ka Mareykanka kadib markii ay ku soo dhacday deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sawiro ay baahiyeen warbaahinta Al-Shabaab maanta oo Axad ah ayay ku sheegeen burburka diyaarada drone-ka ah.
Waxay intaas ku dareen in diyaarada oo nooceeda ay ku sheegeen drones-ka wax basaasta ay maalmihii u dambeeyay ku wareegaysay deegaankaas.
Ma jirto xaqiijin dhab ah oo ku saabsan arrintaas marka laga reebo sheegashada Al-Shabaab.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay Al-Shabaab sheegato in ay qabteen diyaaradaha drones-ka oo ku soo dhacday deegaanada ay joogaan, horey ayay sidaan oo kale u sheegeen.
Labadii sanno ee u dambeeyay, Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha cirka ee ka dhanka ah maleeshiyada xagjirka ah Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya, waxaana lagu dilay duqeymahaas tobonaan dagaalyahan.